Manome topimaso ny fiainana ao Japana avy amin’ny fijery vahiny ny “Tokyo Interlopers” (ireo Mpitsofotsofoka ao Tokyo) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2019 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, English
Sary natolotry ny Tokyo Interlopers. Fampiasàna nahazoana alalana.
Misora-tena ho toy ny “mpanangona ireo tantara, saripika an'ireo vahiny ary ireo safiotra ao Japana”, ry zareo Tokyo Intelopers ( mpitsofotsofoka ao Tokyo) dia mifantoka amin'ireo mpiasa mpifindramonina, ireo mpianatra asa, ireo mpianatra avy amin'ny lafivalon'ny tany, ireo mpila ravinahitra, ireo mpitsidika sy ireo hafa monina ao an-drenivohitra Japoney.
Naorin'i Isaac “Tac” Aquino, mamoaka tsy tapaka an'ireo fanolorana fohifohy sy ireo fitafàna tamin'ny olona avy amin'ny ankolafy samihafa ireo Mpitsofotsofoka ao Tokyo, mivoaka tsy tapaka eo amin'ny tranonkalan'ireo Mpitsofotsofoka ao Tokyo, avy eo zaraina amin'ireo mpanaraka maherin'ny 10 000 eo amin'ny Facebook, Instagram ary Twitter. Zaraina ihany koa eo amin'ireo media sosialy ireo fanolorana fohy indrindra sy mahaleo tena:
“Miasa alina amina orinasa iray mpanamboatra ny simba aho. Amin'ny 10 ora alina aho no miditra miasa, ary amin'ny 6 ora maraina no mirava. Saingy noho izy ireo tsy afaka mampiditra mpiasa Japoney tanora, maro dia maro ireo vahiny toa ahy no miasa ao Japana manao io karazana asa io. Tsy handainga aho, henjana io.”
Manohy mamadika an'i Tokyo ho tanàna manana kolontsaina isankarazany sy foko isankarazany ireo mponina vahiny. Heverina fa mponina avy amin'ny firenena maherin'ny 180 no monina ao amin'ny faritra metropolitaina ao Tokyo ary mponina iray amin'ny valo ao Shinjuku, ilay faritra lehibe ao afovoan'i Tokyo, dia teratany vahiny. Mahafinaritra ny sasantsasany amin'ny tantaran'izy ireo, raha toa ka mizara ireo fanamby mihatra aminy mandritra ny fipetrahany ao Japana kosa ireo olona hafa nanontaniana.
“Mpitsoa-ponenana avy any Sri Lanka aho. Tsy azoko lazaina anao hoe nahoana aho no eto saingy roa taona aho izao no teto Japana. 私はスリランカから来たの難民です。詳しい事は言えないが、日本には2年以上住んでいます。 pic.twitter.com/lu3FZfIHCr
Jeren'ireo Mpitsofotsofoka ao Tokyo manokana ihany koa ny tantaran'ireo vehivavy japoney izay tsy maintsy miatrika ny hamafin'ny tontolon'ny asa na ireo làlana manasatra.
“… ao Japana, marobe ireo olona no miasa isanandro efa hatramin'ny misasakalina. Izay no kolontsaina, indrindra fa ao amin'ny toeram-piasana iray anjakan'ireo lehilahy sy tsy ahitana afatsy ireo injeniera fotsiny. Izay no antony mahatonga ireo vehivavy handao ny asany rehefa avy miteraka.”https://t.co/BtaWEFsm57 pic.twitter.com/VNf1GhYr2x
— Tokyo Interlopers (@tokyointerloper) 9 Aogositra 2019
Manome topimaso iray feno sy mahazendana mikasika ny fiainana ao amin'ny metrôpôla Japoney ireo tahirin-tsary feno an'ireo Mpitsofotsofoka ao Tokyo amin'ny fijerin'ny vahiny iray. Raha monina ao Tokyo ianao, afaka mizara ny tantaranao manokana ihany koa avy amin'ny pejy fifandraisana amin-dry zareo Mpitsofotsofoka ao Tokyo.